Buy 1060 sqft May Inya Condo Rent (ID-674) (47Lks) in မရမ်းကုန်း on ipivi.com
1060 sqft May Inya Condo Rent (ID-674)
1060 sqft May Inya condo rent in Mayangone Township. Condo has Living-room, One Master Bed-room, One Single Bed-room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Fully furnished.
၁၀၆၀ စတုရန်းပေအကျယ်ရှိသော ငှားရန် မေအင်းယားကွန်ဒို ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ဒိုအိမ်ခန်းအတွင်း ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် တစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပရိဘောဂအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အသင့်ထည့်သွင်းပါရှိပါသည်။ ကွန်ဒိုအိမ်ခန်း၏ လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
၁၀၆၀ စတုရန်းပေငှားရန် မေအင်းယားကွန်ဒို (ID-674)
အမည်: 1060 sqft May Inya Condo Rent (ID-674)